Esi akwụ ụgwọ WhatsApp, ihe ọ bụla sistemụ arụmọrụ gị bụ Akụkọ akụrụngwa
Esi akwụ ụgwọ WhatsApp, ihe ọ bụla sistemụ arụmọrụ gị
Ọtụtụ ndị bụ ndị jụrụ m na izu ndị gara aga ka esi akwụ € 0,89 na ngwa WhatsApp. Ndị ọrụ nọ n'ọnọdụ a bụ ndị niile dị na ikpo okwu gam akporo na ndị ọrụ ọhụụ nke ngwa ahụ na sistemụ iOS. Kemgbe ọ malitere, WhatsApp maka iOS akwụ ụgwọ, yabụ ndị ọrụ izizi ibudata ma kwụọ ụgwọ maka ya akwụgoro ya site na onye nrụpụta ngwa yana iketa ikike ndụ niile.
N'ihe banyere ndị ọrụ nke Gam akporo na site na mbu akwụghị ụgwọ ọ bụla ebe ọ bụ na maka ikpo okwu ahụ ngwa ahụ bụ n'efu Maka ndị ọrụ iOS ndị budatara ya n'oge na-adịbeghị anya, ihe gbanwere na ha ga-agabiga na ndenye ọpụpụ kwa afọ site na 0,89 2 ma ọ bụ ịzụta ngwugwu afọ 5 ma ọ bụ XNUMX.
Na nkenke, ịmara ma ngwa ị nwere ga-arịọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na ị gaghị aga, ị ga-aga, ma na mbipute maka gam akporo na nke ụdị maka iOS na ntọala> akaụntụ> ozi ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nọ n’etiti otu ndị ọrụ ga-akwụ ụgwọ maka ngwa ahụ, dị ka anyị tụrụ anya ya, ị ga-ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ otu afọ, abụọ ma ọ bụ ise. Ego a malitere n’agbata € 0,89 maka nke mbụ, € 2,40 maka nke abụọ na 3,34 XNUMX maka nke atọ.
Nsogbu na-abịa mgbe anyị ga-akwụ ụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nọ na sistemụ nke apụl bitten, nke a bụ iOS, n'ime ozi nke akaụntụ Apple gị ị nwere ike ịbanye data nke kredit ma ọ bụ kaadị debit nke ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ gbapụta ihe iTunes kaadị na ị pụrụ ịzụta na ihe ọ bụla ụlọ ahịa ma ọ bụ adịchaghị Resellers. Ozugbo i mechara usoro kaadị kredit ma ọ bụ gbapụta ego na kaadị iTunes, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ngwa ahụ na enweghị nsogbu ọ bụla.
Iji gbapụta ihe iTunes kaadị i nwere ike ime ya site na iPhone site na itinye iTunes ngwa na pịgharịa gaa na ala na ihuenyo nke na mpio. Ga-ahụ bọtịnụ "Gbapụta". Otherzọ ọzọ sitere na kọmputa nwere iTunes. Mgbe ị na-abanye na Storelọ Ahịa ahụ, na kọlụm aka nri ị ga-enwe ike ịhụ okwu ahụ bụ «Mgbanwe ".
N'ihe banyere gam akporo, usoro ahụ nwere ike ịme mee n'ụzọ atọ dị iche iche, site na Google Wallet, Paypal ma ọ bụ site na izipu njikọ ịkwụ ụgwọ. Okwesiri ighota na oburu na i jiri onu ahia ugwo 3, i nwere ego 10% ma oburu na ikwuru 5 years 25%.
Kwụ ụgwọ site Google Wallet yiri nke ịkwụ ụgwọ dị ka a ga - asị na anyị nọ na Google Play Maka nke a, anyị ga-eme dịka na iOS, nweta data akaụntụ anyị iji tinye kredit ma ọ bụ kaadị debit ma ọ bụ gbapụta kaadị Google Play nke ị nwere ike ịzụta, ọkachasị na ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo. Ahụla m ha n’ụlọ ahịa egwuregwu.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ kwụọ ụgwọ na PayPal, anyị ga-ahọrọ nhọrọ ahụ na mbụ, n'ezie, nwere akaụntụ PayPal na kredit ma ọ bụ kaadị debit nke a ga-eji.
Nhọrọ ikpeazụ bụ iziga njikọ ịkwụ ụgwọ na email anyị ma mee usoro ịkwụ ụgwọ site na kọmputa. N'ime email ahụ, a ga-enye anyị nhọrọ ịkwụ ụgwọ site na Google Wallet ma ọ bụ site na Paypal. Nhọrọ kachasị mfe bụ ịhọrọ Paypal na-enweghị mkpa ịmepụta akaụntụ, ọ ga-ajụ anyị maka nkọwa kaadị na ịkwụ ụgwọ ahụ ga-adị ka a ga - asị na ọ bụ azụmahịa na kaadị site na weebụsaịtị ọ bụla.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ụzọ dị mfe iji kwụọ € 0,89 obi ụtọ kwa afọ maka ngwa ị na-eji kwa ụbọchị. Ugbu a, ị ga-agbaso usoro ndị anyị gosipụtara ma hụ ma ị ga-emecha usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi akwụ ụgwọ WhatsApp, ihe ọ bụla sistemụ arụmọrụ gị
Online-PDF: njikwa PDF PDF kachasị mma